Olee otú mara ma ọ bụrụ na gị na onye òtù ọlụlụ bụkwa gị ezigbo enyi | Bezzia
Otu esi amata ma onye gị na ya na-emekọ ihe bụkwa ezigbo enyi gị
Maria José Roldan | 11/05/2022 22:32 | Mmekọrịta
Echiche nke onye mkpụrụ obi bụ ihe onye ọ bụla na-achọsi ike na ndụ ya niile. Inwe ike ijikọ mmadụ n'ọkwa mmetụta uche na mmetụta na inwe ezigbo mgbagwoju anya bụ ihe a ghọtara dị ka ezi ịhụnanya. Inweta onye mmekọ ka ọ bụrụ ezigbo enyi gị bụ ihe na-adịghị eme na mmekọrịta niile. Eziokwu a bụ isi mgbe njikọ emepụtara na-adịgide karịa oge.
N'isiokwu na-esonụ anyị na-enye gị usoro igodo iji mara ma onye gị na ya na-emekọ ihe bụkwa ezigbo enyi gị.
Igodo mara na onye gị na ya na-emekọ ihe bụ ezigbo enyi gị
Enwere akara ngosi ma ọ bụ akara nwere ike igosi na di na nwunye ahụ bụkwa ezigbo enyi:
Ịhụnanya nke dabeere n'ọbụbụenyi na-eme ka e nwee njikọ siri ike nke ụkpụrụ ndị dị otú ahụ dị mkpa dị. dị ka ntụkwasị obi, nkwanye ugwu ma ọ bụ ịhụnanya. Ihe a niile na-eme ka mmetụta nke obi ụtọ tinye na mmekọrịta ahụ, nke dị mkpa maka di na nwunye ahụ ka ha na-esiwanye ike ma na-atachi obi n'agbanyeghị oge.
Ịhụnanya na ịhụnanya na di na nwunye adịghị ekwekọ ma ọlị na esemokwu n'okwu dị iche iche. Ọ dị mma maka mmekọrịta ahụ ịnọgide na-enwe ọnọdụ dị iche site n'oge ruo n'oge. Nke a dị mkpa mgbe di na nwunye nwere ike itolite ma na-esiwanye ike.
Ọbụbụenyi dị n'etiti di na nwunye na-adị adị mgbe onye ọ bụla na-anabata ibe ya otú ọ dị. Ọ dịghị mma ka onye òtù ọlụlụ na-agbalị imebi mmetụta onye nke ọzọ na gbalịa ịmanye otú i kwesịrị isi na-eche.
Ọ dịghị mkpa ịta di na nwunye ahụ ụta maka ihe ha mejọrọ. Enyi na-adị na di na nwunye mgbe mmadụ abụọ na-elekwasị anya mgbe niile n'ịchọ ihe ngwọta maka nsogbu ndị nwere ike ibilite. Ọ baghị uru ịta onye ibe ya ụta.
Nnwere onwe bụ otu n'ime isi ihe ma a bịa n'ime ka di na nwunye bụrụ ezigbo enyi. Onye ọ bụla ọzọ na mmekọrịta ga-asọpụrụ ndị ọzọ na hapụ ohere zuru oke maka gị ime ihe n'efu.
Di na nwunye bụ́ ndị enyi ha na-enwe maara otú e si arụkọ ọrụ dị ka otu. A na-ekwurịta nsogbu ọnụ, a na-emekwa mkpebi kacha mma.
Ihe kacha mkpa mgbe niile bụ di na nwunye. Ihe dị mkpa bụ inyere ya aka mgbe ọ chọrọ ya na ịmara na ọ bụghị naanị ya ka a na-edozi nsogbu dị iche iche nwere ike ibilite.
Ihe ole na ole na-atọ ụtọ na ndụ a karịa inwe atụmatụ maka ọdịnihu gị na onye òtù ọlụlụ gị. Tọọ ebumnuche na ebumnobi dị ogologo oge ọ bụ ihe ịrịba ama doro anya na di na nwunye ahụ bụ ezigbo enyi anyị.
Inwe ike ịchịkọ ọnụ na inwe ike ịnụ ụtọ ihe omume ntụrụndụ dị iche iche bụ ihe na-eme ka di na nwunye ahụ nwee obi ụtọ na na-eme ha ezigbo enyi. Ịgbakọ ọchị na-emepụta ọmarịcha njikọ n'etiti mmadụ abụọ ahụ nke siri ike imebi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Otu esi amata ma onye gị na ya na-emekọ ihe bụkwa ezigbo enyi gị
Kedu ihe bụ toxoplasmosis na kedu ka o si emetụta afọ ime?
Nsogbu otutu? Nri iji zere